Mwepụ DNA mkpụrụ ndụ, mmịpụta DNA plasmid, na mwepụ nucleic acid na ịdị ọcha nke ihe atụ dị iche iche. Nnukwu mmiri mmiri na-arụ ọrụ iji nweta arụmọrụ dị elu, dị ka mmiri ozuzo protein, mmịpụta mmiri, na nhazi nke anụ anụmanụ, nje bacteria, osisi, ala, ihe nlele ahụike, yist, wdg.
1.The miri ọma efere ka nke polypropylene, a polima ihe na ezi chemical ndakọrịta. Enwere ike iji ya maka nchekwa nke ọtụtụ polar organic solutions, acid na alkaline ngwọta na laabu.
2.High okpomọkụ na sterilization dị elu, enwere ike ịdọrọ iji chekwaa ohere. Efere niile enweghị afụ, enweghị eriri, enweghị ihe ọhụụ. Gamma-ray sterilization na-abụghị nwoke ịga ụlọ ọgwụ bụ nhọrọ.
3. Enweghi enzymes DNA na RNA, enweghị isi ọkụ. Soro ụkpụrụ SBS / ANSI maka pipettes nwere ọtụtụ ọwa na ebe ọrụ akpaka.
4.High mma polypropylene ihe, Single okpomọkụ akara, nnukwu ma ọ bụ juru n'ọnụ na e nyere ahịrị site ọnya tree, Obere size, mfe na-echekwa
5.Sample nchekwa: ọ nwere ike dochie ot 1.5ml centrifuge tube na-echekwa n'omume, na ike ga-ahazi tidily ịzọpụta ohere, na nnukwu nchekwa ikike, na ike idi -80 ℃ friji ọnọdụ. Ya mere, a na-akpọkwa ya efere nchekwa.
6.Sample nhazi: enwere ike iji ya jikọta ya na multipass pipettes, ndị na-arụ ọrụ mmiri mmiri na-arụ ọrụ dị elu na softwares dị iche iche iji kwe ka arụmọrụ dị elu nke ihe ndị dị ndụ, dịka ọmụmaatụ, ọdịda mmiri, mmịpụta mmiri, mmịpụta acid, wdg. Gbanwee arụmọrụ nke nhazi nhazi. Nwere ike ịnagide okpomọkụ dị elu
7.Bardard enweghị afụ, enweghị ọnyá, ọ dịghị awụfu, ike dị elu dị elu, ngalaba njikọ siri ike;
8. ccnweta ọbụna ibu ọrụ ọrụ, ruo 1.2 mL ma ọ bụ 2.2 mL nchekwa olu kwa nke ọma;
Ndị na-edozi na DNA agaghị agbaso PP, na-enye ohere iji nweta mgbake zuru oke.
9.Natural agba na-eme ka ọ dị mfe ịchọta notch design. Jiri: Na-emetụta usoro njirimara, HTS, nnabata nnabata
na ịlele, n'ibu nlele na akpaghị aka kpaliri ọmụmụ usoro;
10.96 Enwere ike iji efere dị omimi nke ọma maka uto nke ọdịbendị ma ọ bụ nchekwa nke ogige.
Pyramid-ala na-eme ka ihe nlele weghachite ma melite ịgwakọta n'ime nke ọma site na ịmepụta sloshing mmetụta kama vortex
11.mgbe nkpatu, polypropylene ewu awade a ala nkịtị njikọ iji gbochie samples si ịrapara n'akụkụ mgbidi.
MBA. Nkọwa Ọfọn Mpịakọta Udi N'ala Mbukota / Ctns Ntughari nwa nwoke
PC0016 Deep miri efere 96 2.2ml Oghere U 50 Nhọrọ
PC0017 Deep miri efere 96 2.2ml Oghere U 50 Nhọrọ
PC0018 Deep miri efere 96 2.2ml Oghere V 50 Nhọrọ
PC0053 6 warara tube 6 2.2ml Oghere U 1500 Nhọrọ
PC0053F Efere (ogbe) AKU 2.2ml / / 168 Nhọrọ
PC1064 Deep miri efere 96 2.0ml Oghere U 50 Nhọrọ
PC0073 Efere nkedo 96 0,5ml Oghere V 100 Nhọrọ
PC0076 8 warara tube 8 2.2ml Oghere V 1500 Nhọrọ
PC0076F Efere (ogbe) AKU 2.2ml / / 168 Nhọrọ
PC0084 Deep miri efere 96 2.2ml Oghere U 50 Nhọrọ
PC0085 Deep miri efere 96 1.6ml Oghere V 80 Nhọrọ
Nke gara aga: Efere PCR
Osote: Nkedo-mkpanaka mbo
PC0016 2.2ml 96 miri emi nke ọma efere U ala
PC0017 2.2ml 96 miri emi nke ọma efere V ala
PC0018 2.2ml 96 miri emi nke ọma efere U ala
PC0053 6 warara tube
PC0076 8 warara tube V ala
PC0084 2.2ml 96 miri emi nke ọma na-enweghị sket
PC0085 1.6ml 96 miri emi nke ọma efere V ala
PC1064 2.0ml 96 miri emi nke ọma efere U ala